I-Trigger Rally, umdlalo ovulekileyo womthombo woBuntu kunye neziphumo | Ubunlog
Kwinqaku lanamhlanje siza kujonga iTrigger Rally. Oku yi simahla kunye nomthombo ovulekileyo wokuqhuba umdlalo wokuqhuba imoto, ezizama ukulinganisa ezaziwa njengeFord Focus ye «Carlos Sainz» okanye iMitsubishi Lancer ye «Tommi Makkinen». Emva kokuyifaka, siya kufumana umdlalo wokubaleka womdlali omnye. Oku kuya kufumaneka kwi-GNU / Linux nakwiWindows.
Ngale sicelo siza kufumana i-rally simulation simulation nge Injini enkulu yefiziksi yokukhukuliseka. Ngaba uya kusinika ngaphezulu kweemephu ezili-100 zokudlala. Iya kusibonelela ngezinto ezahlukeneyo zomhlaba ezifana nobumdaka, i-asphalt, isanti, kunye nomkhenkce phakathi kwabanye, kunye neemeko zemozulu ezahlukeneyo njengokukhanya nenkungu eya kuthi inike le rally ukulinganisa inqaku elingaphezulu kwabanye. imidlalo yokuzonwabisa yomxholo ofanayo.
Ukudlala, kufuneka uyenze ngokusebenzisa iimephu kwixesha elimiselweyo. La maxesha ahlala exinene kakhulu ukuze sihlale sizama ukuphucula nangakumbi ukubetha amanqaku arekhodiweyo. Zonke iintlanga ezikhoyo kufuneka zigqitywe kwangexesha ukuze uphumelele umsitho, esiza kuwufezekisa vula iminyhadala eyongezelelweyo kunye neemoto.
1 Iimpawu ngokubanzi zeTrigger Rally
2 Faka iTrigger Rally kwi-Ubuntu kunye neenkqubo ezifumanekayo
3 Khipha irali yeTrigger
Iimpawu ngokubanzi zeTrigger Rally
Izidingo zehardware ezisezantsi. I-Trigger Rally isebenza kakuhle kunye namaqela amancinci kwaye angaqhubi kakuhle. Makungabikho namnye olindeleyo kwimizobo esemgangathweni okanye izinto ezinje. Ukuba into efana namahlwantsi ekhephu okanye utyani esinokuyibona kumdlalo ifuna lukhulu kwiqela lethu, siya kuba nethuba lokuzikhupha ukuze dlala ngokutyibilikayo.
Iziphumo zemozulu, umhlaba wefizikiki okanye ilizwi lekopi ezinye izinto ezipholileyo zomdlalo. Uninzi lweemephu zixhotyiswe ngamanqaku ekopi athethiweyo kunye neempawu ukusinceda xa uqhuba.
Un umdlalo kulula ukuyiguqula. Imidyarho ayikho enye into ngaphandle kweefayile zeXML kunye noburhabaxa ukuze siziguqule ngendlela esithanda ngayo. Ngale nto sinokutsala isifundo esilandelayo abasenza sifumaneke kwifayile ye- iphepha lewebhu. Sinokukhuphela ezinye iimephu kunye neziganeko zomdlalo, ezilungele ukukhutshelwa njengeeplagi.
Imephu yokufundisa kunye nesalathiso seXML. Ubininzi be iinkcukacha zoqwalaselo Ukubonisa kunye noseto lweaudiyo lunokuhlelwa ukusuka kwifayile ye- ifayile yoqwalaselo, isicatshulwa esicacileyo. Singavula le fayile kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kwaye senze lo myalelo ulandelayo kunye nomhleli esithanda kakhulu:
Umdlalo uneendlela ezimbini, eyokuqala "iwindow" kunye neyesibini "iscreen esigcwele". Oku akuthethi ukuba inokuqwalaselwa ngexesha lomdlalo. Akukho ndlela yokumisela kuyo xa iqala. Ukuyitshintsha kuya kufuneka siyimise kwifayile eboniswe apha ngasentla.
Ukuba umntu ufuna ukwazi ngakumbi ngalo mdlalo, banokujonga zonke izinto kunye neemfuno zayo iwebhusayithi yabo.
Faka iTrigger Rally kwi-Ubuntu kunye neenkqubo ezifumanekayo
Kwiinguqulelo zamva nje ze-Ubuntu (ndizamile kuhlobo lwe-16.04 kwaye isebenze ngokugqibeleleyo), I-Trigger Rally iyafumaneka kwiifomathi ezisemthethweni zenkqubo. Siza kuba nakho ukufaka lo mdlalo sisebenzisa iZiko leNkqubo okanye sisebenzise umyalelo kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Nangona kunjalo, kwiinguqulelo ezindala zenkqubo yokusebenza, ukufaka umdlalo okanye ukuba sifuna ukubanakho ukufumana ngokuzenzekelayo uhlaziyo lwamva, kuya kufuneka siyifake kwi-PPA yayo ehambelanayo. Kule nto siza kusebenzisa i-terminal (Ctrl + Alt + T). Kuyo siya kubhala le miyalelo ilandelayo:
Ukuba asikabinayo yongeze i Inkqubo yokugcina, siya kuyongeza ngalo myalelo ulandelayo:
Okwangoku, siza kuhlaziya umphathi wephakheji ngomyalelo:
Kwaye ngoku sinokufaka umdlalo sisebenzisa lo mthetho ulandelayo:
Khipha irali yeTrigger
Ukukhupha lo mdlalo kwinkqubo yethu yokusebenza, kuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sibhale oku kulandelayo:
Ukuba wongeze indawo yokugcina umdlalo kwaye awusafuni kuluhlu lwakho, ungayilahla ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
Abaphuhlisi bomdlalo bayabuza abasebenzisi abanika ingxelo ngeempazamo kunye nezinto ezinokubakho usebenzisa i Inkqubo yetikiti ukusuka kumthombo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-Trigger Rally, umdlalo ovulekileyo womthombo woBuntu kunye neziphumo